लेख / रचना - संविधान च्यातेर फ्याँकिने जोखिम !
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजविन आयोग गठन हुन नसकेको होइन, सरकारले नचाहेको हो । यी आयोगहरू सरकारद्वारा गठित हुने भएपनि न्यायालय जत्तिकै स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर दुवै आयोगका गठनमा माओवादी युद्धका हर्ताकर्ताहरू हावी भइदिनाले काम ठप्प छ । सत्यनिरुपण आयोगमा दर्ता भएका ६३ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको छानविनमा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ । ‘युद्ध’ को आह्वान सरकारले वा भनौं नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाले गरेको होइन, माओवादीले गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
कुरा हेल्मेटको काम कमिशनको
जनताको जीउधनको सुरक्षा सरकारको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा जनता जनार्दन हुन् । जनताको मत पाएर सत्तारुढ भएको पार्टी र नेतृत्वको ध्यान जनता केन्द्रित हुनुपर्छ । यसै अर्थमा सरकारले दुई पांग्रे सवारी अर्थात मोटरसाइकलमा सवार हुने दुबै यात्रुले हेल्मेटको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने गरी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको प्रसंग सार्वजनिक भएको छ । सुन्दा आकर्षक र जनताको भावनामैत्री लाग्छ यो तयारी । तर यसका पछाडिको अन्तर्य भने बेग्लै हुनसक्छ । कारण सरकारको कार्यशैली र व्यवहार अर्कै देखिन्छ । नेपालमा हेल्मेटको उत्पादन छैन । भारतबाटै धेरैजसो हेल्मेट आयात गर्नुपर्छ ।	थप पढ्नुहोस्
भारतीय निर्वाचनका भित्री कुरा
भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण यसपटक पनि २७ मईका दिन हुने सम्भावना छ, जुन दिन (२७ मई) १९६४ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको निधन भएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघिल्लो कार्यकालको शपथग्रहण त्यही दिन (नेहरु निधनको ठीक ५० वर्ष पुगेकै दिन) गरेका थिए । दुवै पक्षले यसपालीको निर्वाचनलाई जीवन–मरणको सवालका रुपमा लिए । प्रधानमन्त्री मोदीले १४२ वटा सडक कार्यक्रम र चुनावी सभा (¥याली) लाई संवोधन गर्न भ्याए । विपक्षी दलहरू ‘मोदी आँधी’ बाट सुरक्षित हुन (महा) गठबन्धन बनाए, आफ्ना सबै ताकत र सामथ्र्य यो निर्वाचनमा खन्याए ।	थप पढ्नुहोस्
सोभियत कम्युनिष्ट सिद्धान्तको प्रेस सञ्चालनको तयारीमा सरकार
हाँसको बथानमा बकुल्लो लामो समय बस्न सक्दैन । त्यस्तै नेपालको प्रजातान्त्रिक मोर्चामा कम्युनिष्ट पनि सधैं टिक्ने कुरा भएन । हाल देशको शासन सत्ताको भार सम्हाल्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अर्थात ने क पा पनि यसबाट अछुतो रहने प्रश्नै भएन । नेपाली जनताको दुईतिहाई समर्थन नजिक हैसियतमा छ यो सरकार । गएको निर्वाचनमा मतदाताले त्यो हैसियतमा पु¥याए यताका उसका गतिविधि अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छन् । यो श्रृंखलाको पछिल्लो कडी मिडिया काउन्सिल,आम सञ्चार ऐनलगायतका विधेयकबाट छर्लङ्ग भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
कसैले नरेन्द्र मोदीबारे उडन्ते विचार बनायो, यदि उनले स्वयंलाई फाँसी दिए भने पनि कांग्रेसलाई जति सिट मिल्नुपथ्र्यो त्योभन्दा ज्यादा मिल्ने थिएन । एक प्रधानमन्त्रीका लागि यसो भन्नु असभ्य कुरा होे, करिब त्यस्तै शब्दहरूका साथ जो मोदी आफैंले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र वर्तमान विरोधीहरू उपर हमला गर्नका लागि उपयोग गर्नुभएको छ । कतिपय मानिसहरूको भनाई के छ भने पूरा भइसकेका प्रत्येक चरणका मतदानबाट मोदी औडाहाग्रस्त भइरहनु भएको छ, त्यसैले ब्युहरचना व्यर्थ भएको जस्तो हुनुभएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
नेकपाभित्र भूसको आगो – ओलीबिरुद्ध कसिलो मोर्चा
काठमाडौं । मुलुकमा कम्युनिष्ट बहुमतको सरकार बनेपछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र समर्थित कार्यकर्ता मात्र नभै विपक्षमा भोट होल्ने मतदातासमेत उत्साही बनेका थिए । हुनपनि लामो अस्थिरता र खिचातानीपछि मुलुकले स्थिर सरकार पाउनु सकारात्मक थियो । नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव राख्ने सबैले केपी ओली सरकारप्रति आशा र भरोसाका आँखा लगाएका हुन् । तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो यो सरकार बेकम्मा भइसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकार बनेको करिब डेढ वर्षको समय व्यतित भइसक्यो । अब भने यो सरकारको काम कारवाहीप्रति रुखो टिप्पणी गर्न सबै तम्तयार छन् ।	थप पढ्नुहोस्
पार्टी फेरेर वा फोरेर जुटेका यादव, भट्टराई र राईको संयुक्त भान्सा
हालै ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ को अवतारमा देखापरेको नयाँ समीकरणमा मधेशी फोरमका सर्वेसर्वा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादीका सिद्धान्तकार, नीतिकार तथा १० वर्षे हिंसा र रक्तपातका रणनीतिकार माओवादीमा उपाध्यक्ष भइसकेर ‘नयाँ शक्ति’ नामक पार्टी बनाएका र त्यो पनि विघटन गरेर हिंडेका डा. बाबुराम भट्टराई र एमालेको उपाध्यक्षसम्म भएर एमाले छोडेका, संघीय समाजवादी पार्टी बनाएका तर चलाउन नसकेर उपेन्द्र यादवभित्र बिलय भएका अशोक राई तीन मूख्य चरित्र देखिएका छन् । पार्टी फेर्नु वा फोर्नु यिनीहरूको विशेषता हो ।	थप पढ्नुहोस्
भारतीय आमचुनाव :- चौकीदार, मोदी र नेपालमा प्रभाव
चुनावी ज्वार बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय स्तरकै नेताहरूका बीच तल्लोस्तरको गालमुखाल र आरोपप्रत्यारोप त्यही दरमा चर्किरहेको छ । समग्रमा हेर्दा दुर्मुखा वचन भाजपातिरबाट भन्दा विपक्षबाट चर्को स्वरमा आइरहेको छ । पश्चिम बंगालका मूख्यमन्त्री तथा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बेनर्जीले चुनावीसभामा नरेन्द्र मोदीलाई “मैले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै मानेको छैन” मात्र भनिनन्, “मिल्ने भए गालामा थप्पड मार्न मन लागेको थियो” सम्म भन्न भ्याइन् । मोदीले आफुलाई चौकीदार भनेकोमा कांग्रेसबाट नारा लाग्यो “चौकीदार चोर हो ।	थप पढ्नुहोस्
"काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर" – हाम्रा पुर्खाले यो उखान त्यसै बनाएका रहेनछन् । दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तामा विराजमान कम्रेड केपी ओलीको ध्यान मुलुक र जनताको समृद्धितिर कम , घाँटी निमोठ्नेतिर बढी देखिएको छ । प्रसंग मिडिया काउन्सिल गठनसँग जोडिन्छ । प्रजातन्त्रले नपुगेर हामी लोकतन्त्रको यात्रामा बढेका छौं, तर सरकारको काम भने पूर्ण निरङ्कुशता लाद्नेतर्फ उद्यत् छ । कुनै बेला बयलगाडामा चढेर गणतन्त्र आउन सक्दैन भन्ने उखान हाल्ने ओली सत्तामा आएपछि नयाँ राजतन्त्र स्थापनामा तल्लिन छन् । त्यसैको पछिल्लो उपक्रम यो प्रकरणका रुपमा आएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लङघनकर्ताहरूलाई विश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रुपमा अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन एक दशकभन्दा अघि नै माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि नेपाली अधिकारीहरूले एक जिवन्त, लोकतान्त्रिक र खुला समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता लिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
उप–मेयर कप महिला टि–ट्वान्टी ...